काठमाडौंमा निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै, तर मोडालिटीमा अन्याेल ! - नेपालबहस
काठमाडौंमा निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै, तर मोडालिटीमा अन्याेल !
| १४:२३:४९ मा प्रकाशित
२३ भदौ, काठमाडौं । चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो हुने भएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने तयारी थालेका हुन् ।
मंगलबार दिउँसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबीच भर्चुअल छलफलमा पनि यस विषयमा ठोस निर्णय हुने अनुमान छ । भदौ ४ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञाले सर्वसाधारणमा निकै समस्या भएपछि निषेधाज्ञा खुकुलो गर्न लागिएको हो । यद्यपि सार्वजनिक वा निजी गाडी खुल्नेसम्मको निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने मोडालिटी तय भइसकेको छैन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयका अधिकारीबीच कुन मोडेलमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ । तर मोडालिटीका बारेमा अन्योल कायमै छ । भदौ १७ गते फेरि एकहप्ताका लागि थपिएको निषेधाज्ञा बुधबार राती सकिदैछ ।
रुकुमकोटमा निषेधाज्ञा हट्यो, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे कारवाही ११ घण्टा पहिले
धुलिखेल–काठमाडौं विद्युतीय बस सञ्चालनमा ३ घण्टा पहिले
सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कांग्रेसको निर्णय, संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग ६ घण्टा पहिले
यौनशक्ति बढाउनेका लागि माछा फलदायी ८ घण्टा पहिले
सिराहामा पक्राउ परेका बिचौलियाको अनुहार ८ घण्टा पहिले
नारायणीको सतहले खतराको विन्दु पार गर्यो ७ दिन पहिले